Dhabar jab wayn oo soo gaaray kooxda Man City – Gool FM
Dhabar jab wayn oo soo gaaray kooxda Man City
Byare September 25, 2016
(Manchester) 25 Sebt 2016. Kooxda Man City ayaa kulamo muhiim ah dhaawac ku waayi doonta xiddiga laf dhabarka u ah ee Kevin de Bruyne.
Kubbad qaabeeyaha reer Belgium ayaa isagoo dhutinaya laga saaray garoonka kulankii dhawaa ay Man City 3-1 uga adkaatay kooxda Swansea City, waxaana la xaqiijiyay inuu garoomada ka maqnaan doono muddo afar usbuuc ah kaddib tijaabooyin caafimaad oo la marsiiyay.
De Bruyne ayaa u safri doona Barcelona beri oo isniin ah si loogu soo daweeyo halkaa wuxuuna seegi doonaa kulanka Champions League ay Man City arbacada la yeelan doonto Celtic iyo sidoo kale kulanka ay axada la yeelan doonaan kooxda Tottenham.
Laacibka ayaa sidoo kale seegi doona kulamada uu xulkiisa ciyaarayo isreeb-reebka koobka adduunka ay la kala yeelan doonaan Bosnia iyo Gibraltar.
Waxay kaloo u badan tahay inuu seego kulamada Premier League ay kooxdiisu la yeelan doonto Everton iyo Southampton iyo waliba kulanka Champions League ay City la yeelan doonto Barcelona.
Kooxda lagu naaneyso Sky Blue ayaa la xusuustaa inay hoos u soo dhacday muddadii labada bilood uu dhaawaca uga maqnaa laacibka reer Belgium kal ciyaareedkii la soo dhaafay.
Luciano Spalletti oo si caro leh uga hadlay guul daradii soo gaartay galabta
SERIE A: FIO VS ACM 0-0...Milan & Viola oo is mari waayay + Sawirro